नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एकीकृत माओवादीबाट हालै विभाजन भएको नयाँ माओवादीले के के निर्णय गर्‍यो ?
एकीकृत माओवादीबाट हालै विभाजन भएको नयाँ माओवादीले के के निर्णय गर्‍यो ?
एकीकृत माओवादीबाट हालै विभाजन भएको नेकपा–माओवादीले केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनयन गर्नुका साथै भ्रष्टचारका विरुद्ध र राष्ट्रियताका पक्षमा अभियान सहित संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । राजधानीमा तीन दिन सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अन्तरिम संयुक्त सरकार बनाउने पक्षमा निर्णय गरेको अध्यक्ष मोहन बैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेकपा–माओवादीले गोलमेच सभा, अन्तरिम संयुक्त सरकार र अग्रगामी राजनीतिक निकासको पक्षमा आधार तयार पार्नका लागि संघर्ष संगठित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा प्रचारात्मक संघर्षको अभियान चलाउने छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध भण्डाफोर अभियान समत चलाईने छ । बैठकले उपाध्यक्षमा सिपी गजुरेल, महासचिवमा रामबहादुर थापा, सचिवद्वयमा देव गुरुङ्ग र नेत्रविक्रम चन्दलाई मनोनयन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य र पोलिटब्युरोका बारेमा भने कुनै निर्णय नगरेको नेकपा–माओवादीले जनाएको छ । विभिन्न राज्यहरुलाई समावेश गरी संगठन ब्युरोहरुको गठन गर्नुका साथै पोलिटव्युरो सदस्यहरुको पनि उसले कार्यविभाजन गरेको छ । पूर्वाञ्चल व्युरो (लिम्बुवान, कोचिला तथा किरात राज्य)को इञ्चार्जमा खड्कबहादुर विश्वकर्मा, मधेश व्युरो (मिथिला, भोजपुरा, अवध)को इञ्चार्जमा प्रतीक, मध्यमाञ्चल ब्युरो
(नेवाः, ताम्सालिङ)को इञ्चार्जमा हितमान शाक्य, पश्चिमाञ्चल ब्युरो (मगराँत, तमुवान) को इञ्चार्जमा बसन्त, सुदूर पश्चिमाञ्चल ब्युरो (सेम, भेक, थारुवान)को इञ्चार्जमा सोनाम, अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको इञ्चार्जमा धर्मेन्द्र बास्तोला, जनबर्गीय संगठन–मोर्चाव्युरोको इञ्चार्जमा नारायणप्रसाद शर्मा, प्रचार÷प्रसार ब्युरोको इञ्चार्जमा पम्फा भुसाल, युवापरिचालन ब्युरोको इञ्चार्जमा नेत्रविक्रम चन्दलाई जिम्मेवारी दिइएको बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।